FAQ - rinofarirwa kupfuura mubvunzo & mhinduro pamusoro kudzidza uye zvipenyu muUkraine
We unganidza zvikuru akakurumbira vadzidzi mibvunzo uye Ukrainian Munopinda Center kupindura kwavari.
Nei Ukraine ani iwe reverero dzidzo, ndezvipi musiyano uye zvakanakira Ukrainian dzidzo?
Ukrainian gadziriro edzidzo anonzi kuva chikamu yaimbova Soviet Union uye European gadziriro edzidzo, iyo maitiro edzidzo yakanga yakakodzera kuzivikanwa somumwe chakanakisisa munyika. An dzinonakidza peculiarity dzidzo yedu Munhu yokusvika mudzidzi ari mudzidzisi wacho. Mumwe mudzidzi kubva Cameroon vauya kwatiri ichangobva uye akaudza noruyemuro kuti vose lecturers aiziva vadzidzi vavo namazita. Paakanga ane zvidzidzo muCameroon, mumwe mudzidzisi pane aipa hurukuro asati hapana asingasviki mazana vadzidzi uye havana kutaura pamwe mudzidzi mumwe nomumwe. Pano zvebudiriro mabasa neboka 30 vadzidzi uye anoziva vose nezita. Anogona kuteerera munhu wose uye tsanangura chinhu mune nomumwe munzira mudzidzi kana chinhu haasi pachena zvose panguva uye pashure hurukuro. Kunze mutengo kuti dzidzo uye upenyu muUkraine achiri kudzika kupfuura European Union kana America. Uyewo zvakafanira kufunga kuti zviri nyore kuwana vhiza kudzidzisa Ukraine kupfuura EU uye America nyika. Somugumisiro une mukana vawane dzidzo yepamusoro nokuti vanganzi yakaderera mutengo wakanaka uye democratic nyika European.
Seiko akataurei Kharkov? Ndinogona kuuya rimwe guta nokubatsirwa renyu?
Tinoratidza Khakov, nokuti guta guru rokudzidzisa Ukarine uye kumwe developement uye guta rakanaka mairi. Tinogona kubatsira kuwana kukokwa kadhi kubva vakadzidza pokugadzwa Ukraine chero yepamusorosoro kuti kufarira uye rinoronga kusvika yako uye kubvuma pamwe mumiririri kuyunivhesiti vakasarudzwa. Hatigoni kuvimbisa, zvisinei, kuitira mimwe kubatsirwa rimwe guta kubvuma Kharkov, nekuti headquater yedu yaiva Kharkov.
Ko Ukraine ari nhengo European Union?
Aihwa, panguva Ukraine haisi nhengo kana European Union kana Schengen Agreement. Asi nokufunga kuti Ukraine anoudzawo European democratic Misimboti budiriro, iri munharaunda yakakura muna Europe uye miganhu US nhengo inoti kumadokero, wokupinda European Union chinangwa inokosha kuti nyika yedu. Panguva iyoyo Implementation kuti pasipoti-isina-zone pakati Ukraine uye EU anonzi. European kusarudza Ukraine kunosimbiswazve nemashoko yokuti European Football ushasha Euro-2012 kuchaitika muUkraine. Uye isu tiri vanozvikudza kuti Kharkov ndeimwe 4 maguta apo European Football machisi Euro-2012 yaiva kutora nzvimbo.
Zvinoita here kuwana bhezari kana kupa vadzidzi yokumwe apo kudzidza establishments wokuUkraine yepamusorosoro dzidzo?
Zvinosuruvarisa hapana, hapana dzidzo kana kwaanoita kuti zvizvarwa yokumwe muUkraine.
Zvinoita kupinda gore mashanu kupedza dhigirii vaTenzi chete?
In dzidziso zvinokwanisika asi zvakaoma, nokuti dhipuroma wacho yokuenzana vomunyika yako ichakurukurwa kubudikidza Ministry of Education uye Science rweUkraine uye vakasarudza iwe nyaya. nzira iyi chichaitwa nokuda yunivhesiti chamunofanira muchipinda.
Pane enhabvu ari kuyunivhesiti?
Chaizvoizvo yunivhesiti ose ane yayo nhabvu chikwata. Uyewo pane zvikwata zvimwe mutambo mabasa. Gore negore pane mutambo makwikwi pakati mumayunivhesiti muUkraine kusanganisira marudzi ose mutambo. Makwikwi vari abate zvose panguva kwematunhu uye senyika.
In mutauro ipi vanodzidzisa mu Africa?
Mugore rokutanga kudzidza mutauro Russian panguva regadziriro fakaroti. Kupinda gore rokutanga vakanga kudzidza mu Russian. Dzimwe nguva kudzidza muna wokuUkraine asi izvi mitauro akafanana chaizvo. Kune akawanda zvinodiwa mumutauro Chirungu.
Ndezvipi zvinodiwa vari Chirungu? Zvichidikanwa kupinda panguva regadziriro kodzero kana ndichida kudzidza muna Chirungu?
Unogona kuwana mishonga, mishonga, zvinodiwa zvitatu zveupfumi uye wandei technic zvinodiwa mu Chirungu muna Kharkov. Kubvuma kuti yunivhesiti achava pashure Hurukuro yako Chirungu. Zvakadaro, kana uri akabvuma unogona kutanga zvidzidzo zvako kubva pakutanga gore pa yunivhesiti pasina regadziriro fakaroti.
Pane mukana kudzidza muna French?
Zvinosuruvarisa hapana mukana ane muUkraine panguva yakadaro.
Ko dzidzo kuitwa pamwe Ukrainian vadzidzi vari chete mapoka kana oga kuti vadzidzi vokune dzimwe nyika? How vadzidzi vazhinji vari rimwe boka?
Pandaidzidza Russian panguva regadziriro fakaroti vadzidzi kupinda makirasi chete vatorwa. Hapana kupfuura 10 vadzidzi mumwe boka. Mugore rokutanga kosi yacho panguva yunivhesiti uye pane dzimwe kosi, dzidzo zvinogoneka zvose mapoka nokuda vadzidzi vokune dzimwe nyika uye muzvikwata wokuUkraine vadzidzi. It zvinoenderana kodzero dzako uye kuyunivhesiti akasarudzwa. Zvakadaro, kana zviri nevakawanda zvinodiwa akafanana mushonga, chitoro chemishonga, akitekicha, pane vakamisa mapoka vadzidzi vokune dzimwe nyika. Kana ukasarudza isingawanzowanikwi zvinodiwa pakati dzimwe vadzidzi vakaita evanhu kana zvemaumbirwo, uchabva kudzidza pamwe Ukrainian vadzidzi. Dzidzo mumapoka unogamuchirwa pasina kupfuura 30 Vadzidzi vari boka muUkraine.
Chii chichava paavhareji wangu mwedzi mari yezvokudya uye mhenyu?
Kubata nevadzidzi tinoona kuti vamwe vadzidzi vanogona kurarama kwenguva 100-150 USD pamwedzi, uyewo pane vadzidzi vanopedza kunyange 1000 USD pamwedzi uye vanotsutsumwa kuti hazvina kuvaringana. We funga Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri musiyano wezvinyorwa ndechokuti unofanira vane kumativi 300 USD pamwedzi zvokudya, senga, mabhuku okuchikoro, zvekushandisa muhofisi uye nguva nenguva kutenga mbatya kunyanya munguva yechando. Unogona kuverenga nyaya yedu pamusoro mutengo kurarama muUkraine uye kuverenga chii chichava mari yako.
Ndingaita sei kuti pepa tsamba?
Unogona kukumbira rubvumo tsamba "Ukrainian Munopinda Center". Tichafara taurai yunivhesiti yako yemberi uye kushandisa zvinhu zvose kuti kuwana kokero tsamba. Panyaya iyi kukokwa mari 200 USD. Mari iyi vachaenda ape pepa uye vhiza rutsigiro tsamba uye kutumira iwe kukokwa tsamba kubudikidza nokukurumidza mabha- basa akafanana FEDEX kana TNT yenyu chishuvo.
Kana muine mubvunzo unogona nguva dzose taura nesu
Whatsapp / Viber / Teregiramu yaienda